Guddoomiyaha Gobolka Meru ee Qaadka laga keeno oo sheegay in naftiisa ay halis ku jirto - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Guddoomiyaha Gobolka Meru ee Qaadka laga keeno oo sheegay in naftiisa ay halis ku jirto
September 8, 2016 admin253
Guddoomiyaha Gobolka Meru ee Qaadka laga beero Peter Munye ayaa sheegay in naftiisa ay halis ku jirto, kadib markii lagu eedeeyay inuu sabab u ahaa joojintii duulimaadyadii Qaadka ee tagi jiray Soomaaliya.
Mr Munye ayaa sheegay inay u badan tahay in Beeraleyda Qaadka inay isaga dilaan, kadib markii Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Amb. Jamaal Hassan uu sheegay inuu sabab u yahay joojinta Qaadka Soomaaliya la geyn jiray.
“Qaabka ay rabaan inay igula xifaaltamaan ma ahan mid wanaagsan, hada waxay qatar geliyeen nafteyda ayuu yiri Mr Munye.
Waxaa uu sheegay in isaga lagu eedeeyay inuu mas’uul ka yahay joojinta Qaadka, isagoo xusay inay hada cadahay sababta loo joojiyay Qaadka ay tahay Shir madaxeedka IGAD ee Muqdisho ka dhacaya todobaadka soo socda.
“Wuxuu isku xirey ganacsiga qaadka Miraa, isagoo farogeliyay arrimaha gudaha dalka Soomaaliya”ayuu yiri Danjire Jamaal Hassan oo ka hadlayay sababtii loo joojiyay Qaadka.
“Tan waxa ay sababtay cadaadis aan loo dulqaadan karin, waxana aan joojinayay ganacsiga qaadka ka imaanayay gobolka Miraa,”ayuu sii raaciyay hadalkiisa
Isniintii la soo dhaafay ayay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay si KMG ah u joojisay dhamaan duulimaadyada qaadka ka keeni jirey dalka Kenya.
Diyaarad qaad sida oo saakay kadegtay garoonka diyaarada Magaalada Galkacyo
Gudoomiyaha Daladda Dhalinyarada Galmudug oo magacaabay Xubnaha Golaha Fulinta
December 28, 2017 Cali Yare
Puntland oo qabatay Rag watay Walxaha Qarxa (Sawirro)